Egwuregwu Egwuregwu: Business Outlook 2021-2026 Onye edemede: | Adidas, Nike, Puma, yunifọm, ASICS, Columbia, The North Face, Patagonia, Burton, prairie nkịta, montbert, Woer Kang, United States na As ...
Akuko "Global Sportswear Market", nke bu ihe omumu zuru oke, kariri onu ogugu nke mgbasawanye ahia n'oge oge amụma ya. Iji nye nyocha ngwa ngwa, akụkọ ahụ gụnyere nha na atụmatụ nke ahịa egwuregwu egwuregwu ụwa n'oge oge amụma. Na addi ...
Ọdịdị ọdịnihu nke ọnụ ọgụgụ egwuregwu baseball egwuregwu ụlọ ọrụ na-eto eto na 2020 Nike, Adidas, N'okpuru Armor, Puma
The "Global Baseball Sportswear Market Research Report" na-enye nghọta bara uru banyere usoro dị ugbu a na nke nwere ike ịdị na ụlọ ọrụ ahụ, ka ndị na-agụ akwụkwọ wee nwee nghọta zuru oke banyere ngwaahịa ahịa, ma nyere ha aka ịmata ohere itinye ego na nkwa ndị ọzọ na dri ...
sis Malaika Arora kwadoro Amrita ime yoga na uwe ime akwa na uwe dị mkpụmkpụ
Amrita Arora na nwanne ya nwanyị bụ Malaika Arora bụ ndị na-eme ka ahụ dị mma, ọ dịghị agọnarị nke ahụ. Tupu ọrịa ahụ amalite, mgbe ha mechara mgbatị ahụ siri ike, a na-ahụkarị ụmụnne nwanyị abụọ ahụ n'èzí ama egwuregwu. Ọbụna n'oge ọrịa ahụ na-efe, ndị ikom abụọ ahụ akwụsịghị mmega ahụ, Amrita's Instagram kacha ọhụrụ ...
Onye nwe azụmaahịa na-emepụta igwu mmiri na uwe egwuregwu
site ha na 20-08-29
Onye nwe ụlọ ọchụnta ego dị obere na Venezuelan Marialexandra Garcia bi na Palmetto Bay (Palmetto Bay) wee hiwe Outplay Gender Neutral igwu mmiri na egwuregwu. Ọkachasị bụ akara igwu mmiri na egwuregwu nke ebumnuche ya bụ imepụta uwe maka “ndị mmadụ anaghị enwe afọ ojuju na omenala sp ...
Uru anụ ahụ nke yoga na-egwu mmiri bụ ihe karịrị oyi na-atụ n'oge anwụ
Yoga enweghị iwu siri ike. Isi ihe omume a bụ iji mee ka ahụ gị dị mma - ịgbakwunye ọdọ mmiri na akụkụ ahụ nwere ike ọ bụghị naanị inyere gị aka ịjụ oyi na oge okpomọkụ, kamakwa ịmekwuo. “Pool Yoga na - eji nguzogide nke buoyancy nke mmiri mepụta tota ...
RHONY Alumni Kelly Bensimon gosipụtara ahụ ya nwere ụda n'egwuregwu egwuregwu na obere mkpirisi mgbe ọ na-agba ọsọ na New York City
Igwe kpakpando nke 52 dị afọ na-ele anya nke ọma na uwe egwuregwu na uwe ojii ojii na obere uwe ojii. Na-agba ọsọ Obodo: Na Mọnde, Kelly Bensimon gosipụtara onye a ma ama na-arụ ọrụ mgbe ọ na-egwu egwu na Manhattan Ọ nọ na-agba ọsọ, ya na Apple Airpods na ntị ya, zoro n'okpuru ntutu isi ọla edo ya, ya wav ...
Best Lululemon Legging Dupes maka Yoga, Na-agba ọsọ & Ọzọ
Us Weekly anyị nwere mmekọ mmekọ yabụ anyị nwere ike ịnata ụgwọ maka ụfọdụ njikọ ngwaahịa na ọrụ. Anyị na-enwe obi ụtọ na onye ọ bụla na-agbapụta n'ihe ha hụrụ n'anya - ọbụlagodi na ọ bụ obere leggings! Ohere inweta bụ, ị na-ma iwere miri ma zụta a ụzọ Lululemon leggings, ma ọ bụ na l ...
A ọkacha mmasị m nke m bụ Yoga's Spacedye leggings
site ha na 20-04-08
Ihe ọ bụla dị na peeji a bụ onye nchịkọta akụkọ ELLE họọrọ. Anyị nwere ike nweta ọrụ na ụfọdụ n'ime ihe ndị ị na-ahọrọ ịzụta. O doro anya na a na-eme yoga leggings maka yoga n'ezie, mana ogologo ọkpa ahụ dịkwa mma maka ndị na-eme opekata mpe. Ha zuru oke nke ndụ anyị ugbu a nke ịgba egwu ...
Uwe mgbatị kacha mma maka ụmụ nwanyị: Olu n'èzí, Alogear Yoga na ndị ọzọ
site ha na 19-11-14
CNN Underscored bụ ihe nduzi gị na ngwaahịa na ọrụ kwa ụbọchị nke na-enyere gị aka ibi ndụ nwere ọgụgụ isi, dị mfe ma nwee afọ ojuju. Ọ bụ CNN Underscored mebere ọdịnaya ahụ. Ndị ọrụ CNN News anaghị etinye aka. Mgbe ị zụrụ, anyị na-enweta ego ha ga enweta. Ogologo oge gara aga bụ ụbọchị ị na-arụ ọrụ na akpa ...